Ukuphupha ngoHahn Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
3 Ukufundwa kweMin
Nabani na osemakhaya kwindawo esemaphandleni unokuvuswa nguye rhoqo kusasa, kuba unokuthembela kumnxeba wokuvuka kweqhude yonke imihla. Sibhekisa kwinkuku eyinkuku, ethi idumbile ikhuphe isandi sayo esithi "Kikeriki" ngokusa ekuseni rhoqo, rhoqo phambi kokusa. Kwaye loo mini emva komhla, phantse rhoqo ngexesha elinye.
Kodwa ke umqhagi wazi njani ukuba ilixesha lokulila? Abanye abaphandi bafuna ukuphanda lo mbuzo kwaye baye baqhuba izifundo ezahlukeneyo apho iqhude zichaneke kwiimeko ezahlukeneyo:
Iziphumo zibonise ukuba izilwanyana azijoliswanga kuzo ilanga ukuphuma okanye ukukhanya kwemini, kodwa banewotshi yabo yangaphakathi. Oku kubaxelela ngokuchanekileyo xa ilixesha lokuba bavuse ubumelwane kwaye ke babonakalise ngokucacileyo ukuba ngubani umphathi kule ndawo. Kwaye ekubeni bekungekho iiwotshi zealam kwixesha elidlulileyo, abantu bebekwazi ukuziqhelanisa nekhwelo lakusasa leqhude kwaye baqale umsebenzi wabo ngexesha.
Yintoni enokuthethwa ngumqhagi njengesilwanyana sephupha, singathanda ukucacisa kule tekisi ilandelayo. Cinga ukuba zeziphi iisimboli ezibonakala ecaleni komqhagi kumava akho ephupha: ibingumququ okanye umgquba, isikhukukazi samantshontsho, ukutya kwenkukhu? Kwakhona tolika le miqondiso yamaphupha.
1 Uphawu lwephupha «Hahn» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Hahn» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umqhagi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Hahn» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Isimboli yamaphupha "umqhagi" unokutolikwa ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa ezi akufuneki zibhidaniswe nepheasant. Njengayo yonke eminye imifanekiso yamaphupha, kuxhomekeke kwezona meko zichanekileyo zomsitho wephupha. Ngokusisiseko, umqhagi ufuzisela ubudoda kunye neenjongo zomntu oyindoda ejikeleze umphuphi. Kodwa intaka nayo imele mpu meleloenokukuguqula ngokukhawuleza ube yqhude elinekratshi kunye nekratshi.
Ukuba umntu uva ukukhala kwenkuku ephupheni, kufuneka alinde iindaba ezibalulekileyo. Ukuba, ngokuchaseneyo, umfazi uva ukukhala kwenkuku ephupheni, kufuneka alumke el mundo lomntu.
Ukuba iphupha ligcwele umona ebomini bokuvuka okanye ukuba ubuhlobo obusondeleyo busongela ukuqhekeka, oku kungabonakaliswa ephupheni lamaqhude amabini alwa. Ngubani kwaba babini onamandla? Mhlawumbi kuya kufuneka uzame ngokwakho Ikratshi Thatha inyathelo ubuye umva kwaye ungazami ngazo zonke iindleko ukuphumelela lo mlo. Kuba ukuphumelela kunokuthetha ukuphulukana nento enexabiso ngakumbi.
Iphupha lakhe kukubonwa ngokuqinisekileyo xa umqhagi ubeka amaqanda endaweni yenkukhu. Apha amaza angalindelekanga xa uphupha Inzuzo yempepho. Ukuba umqhagi uqhuba iphupha lakho ngobuninzi beenkukhu, ubuhlobo obusondeleyo kungekudala buya kujika bube bunzulu. ubudlelwane bothando yiba.
Impumelelo malunga nothando inokwaziswa kwakhona ukuba owasetyhini naye udlala indima ukongeza kwinkuku ephupheni. Apha, kwakhona, iinkcukacha ezichanekileyo zibalulekile kutoliko lomntu ngamnye.
Nangona kunjalo, ukuba i-turkey enkulu ivela kwi-trauma, ukutolikwa kwesimboli yephupha "turkey" kufuneka kusetyenziswe.
Uphawu lwephupha «Hahn» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo kuphando lwamaphupha, umfanekiso wephupha weqhude umele isiqalo esitsha kunye nengqwalaselo. Kodwa apha nakweli phupha linokuchazwa ngokwahlukileyo kwindlela elitolikwa ngayo iphupha.
Inkuku ekhalayo icela umphuphi ukuba aphume kubuvila bakhe kwaye umsebenzi omninzi ukuzisa ebomini bakho. Nangona kunjalo, ukuba iphupha liziva lingabonakali kwaye mhlawumbi lingahoywanga kumcimbi, i-cackle apha ibonisa ukuba kuya kufuneka ucacise iimfuno zakho ngokucacileyo.
Ukubona umqhagi obomvu luphawu lothando Iimvakalelo zothando. Ngokukodwa kumaphupha amabhinqa, iqhude luphawu lwesini lendoda, kumava ephupha lendoda lifanekisela amandla ezesondo kunye nokukhuthaza.
Uphawu lwephupha «umqhagi» - ukutolika kokomoya
Inkuku ibizwa ngokuba yingcaciso yephupha lokomoya. Umgcini wexesha echongiweyo. Ukwakhusela umgaqo wobudoda kunye isiqalo esitsha somoya.
Iphupha malunga nokugonywa
Meyi 18, 2021
Iphupha Malunga noMvukeli
Epreli 11, 2021
Iphupha NgeJet Fighter